आफैँप्रति विश्वास नभएका प्रचण्डको प्राथमिकता आफन्त मात्रै, कार्यकर्ता सधैँ जिल्ल « Dainiki
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार २१:४३
आफैँप्रति विश्वास नभएका प्रचण्डको प्राथमिकता आफन्त मात्रै, कार्यकर्ता सधैँ जिल्ल
२४ कात्तिक, काठमाडाैँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको आन्तरिक तनावले सरकारका कामकारवाहीलाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ । सम्पूर्ण राष्ट्र विकासका केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीका एकजना अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अर्का अध्यक्षले असफल पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ ।
वास्तवमा कमजोरी कसमा छ ? केपी शर्मा ओलीमा छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा छ ? अहिलेको समस्यामा मुख्य दोषी को हो ? यसमा कार्यकर्ता र नागरिकको चासो छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि यता भएका घटनाक्रम, प्रवृति आदीलाई हेर्दा पार्टीको अहिलेको समस्याका मुल दोषी प्रचण्ड हुन, ओली होइन ।
प्रचण्ड अस्थिर नेता हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वालुवाटारमा एउटा सहमति गर्नुहुन्छ र कोटेश्वरहुँदै खुमलटार पुग्दा उक्त निर्णयबाट पछि हट्नु हुन्छ । पछिपछि पहिला नै खुमलटार र कोटेश्वरमा भेला गरी त्यो निश्कर्ष बोकेर वालुवाटार पुग्नुभयो । जव व्यक्तिको आफ्नो अडान, निर्णय र कन्भिक्सन हुँदैन, त्यो राजनीतिक हुँदैन । प्रचण्ड नेता हुनुभयो तर राजनीतिक नेता हुनसक्नु भएन ।
प्रचण्डलाई उहाँले मागे बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुभयो । कार्यकारीले सिंगो पार्टी संचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुनसक्नुभएन, गुटको संयोजकमात्र बन्नुभयो ।
कार्यकर्ता होइन, आफन्त र नाता पहिला
प्रचण्डको राजनीतिको केन्द्रमा पार्टीका कार्यकर्ता छैनन, आफन्त छन् । उनी अयोग्य र असक्षम हुँदाहुँदै पनि आफन्तलाई पद र प्रतिष्ठा दिलाउन दिलोज्यान दिन्छन् । उनको सचिवालयको रसायन हेर्दा त्यो थाहा हुन्छ । छोरी र बुहारीका प्रगति हेर्दा थाहा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार संचालन गर्ने र प्रचण्डले पार्टीमा ध्यान दिने सहमति हो । तर प्रचण्ड पार्टीका गर्नुपर्ने काम केही गर्नुहुन्न, खाली सरकारवारे मात्र सोच्नुहुन्छ । उहाँको ध्यान वालुवाटारमा बढी छ, धुम्वाराहीतिर कम छ । मन्त्री छान्ने अन्तिम अधिकारी प्रधानमन्त्री हो । तर प्रचण्ड त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न । र, सरकारको काममा भाँजो हाल्नुहुन्छ ।
नेकपाले बहुमत ल्याउनुमा ओली र प्रचण्डको पनि योगदान छ । तर मुल्त एमालेप्रतिको बिश्वास हो । व्यक्तिका रुपमा ओलीप्रतिको आकर्षण हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्राजेक्ट गरेपछि पाएको जनमत हो । प्रचण्डले यो स्विकार गर्नसक्नुभएन । ओली र प्रचण्ड बराबरी हैसियतका नेता होइनन् ।
प्रचण्डले बिभिन्न प्रलोभन देखाएर पूर्वएमालेका केही लोभीपापीलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ । र ती नेताहरु नजानिंदो रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । ती र आफ्ना गुटक नेता प्रयोग गरेर ओलीको मानमर्दन गर्ने काम प्रचण्डबाट भइरहेको छ ।
मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा छलफल भएका छन् । मन्त्री प्रचण्डका छन्, राजदूत प्रचण्डका छन् । प्रचण्डका मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालय अन्तगर्त नियुक्त गरेका छन् । सरकार संचालन सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कतिपय नियुक्तिमा प्रचण्डले अवरोधमात्र गरेका छन् । नियुक्तिमा बखेडा झिक्नु प्रचण्डको प्रवृति भइसक्यो ।
कर्णाली प्रदेशको घटना
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल नजिकका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरे । आफूलाई नसोधि प्रस्ताव ल्याएको र त्यो गलत भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । तर प्रचण्ड र नेपाल पक्ष मिलेर एउटा गल्तीमाथि अर्को गल्ती गर्न उकासेको तथ्य हो ।
राष्ट्रवादी होइन, लम्पसारवादी
भ्रमको खेती, प्रोपोगान्डिस्ट
शक्ति र सामथ्र्य बुझ्न नसक्ने
पछिल्लो पुस्ताप्रति अविश्वास
प्रचण्ड आफु पछिको पुस्तामा राजनीतिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । ओली चाहान्छन्, जसको उद्घोष उनले गरिसकेका छन् । अझैपनि आफूले मात्र प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । यो अराजक र तानाशाही सोच हो ।
यी मूल समस्या हुन प्रचण्डका । यो सुची लामो हुनसक्छ । चुपचाप ओली सरकारलाई सहयोग गर्दा प्रचण्डको फेरी नेतृत्वको मौका पाउन सक्छन् । नत्रभए राजनीतिले अर्को बाटो लिनसक्छ् ।
प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०७७, सोमबार २१:४३